Madaxweynaha Cuba oo arrin muhiim ah khadka taleefanka kagala hadlay dhiggiisa Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta! (Maxa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Cuba oo arrin muhiim ah khadka taleefanka kagala hadlay dhiggiisa Farmaajo...
Madaxweynaha Cuba oo arrin muhiim ah khadka taleefanka kagala hadlay dhiggiisa Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta! (Maxa cusub?)
Miguel Díaz-Canel/Photo: Google
Cuba (Halqaran.com) – Madaxweynaha dalka Cuba Miguel Díaz-Canel, ayaa sheegay wada hadal qadka taleefoonka inuu kula yeeshay Madaxweynayaasha dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Miguel Díaz-Canel, ayaa si wayn uga walaacsan xaaladda ay ku sugan yihiin dhaqaatiir u dhalatay dalkaasi oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan.
Qoraal uu ku daabacay Boggiisa Twitterka Maanta oo Talaado ah waxaa uu ku sheegay in labada Madaxweyne uu ka wareystay xaaladda ay ku sugan yihiin Dhaqaatiirta labada ah ee u dhashay Dalka Cuba kuwaas oo laga qafaashay gudaha Kenya laguna hayo gudaha Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweynaha dalka Cuba Miguel Díaz-Canel, ayaa hadalkiisa ku daray in labada Madaxweyne uu kala hadlay sidii labadaas dhaqtar iyaga oo badqaba ay dib ugu laaban lahaayeen dalalkooda.
Dhaqaatiirtaasi u dhalatay dalka Cuba, ayaa laga afduubtay aaga Magaaalada Mandhera Bishii April ee sanadkaan.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo dhaqaatiirtaasi gacanta ku haayo, ayaa waxa ay dalbadeen madax furasho sida laga soo xigtay Odayaasha Gobolka Waqooyi Bari oo Shabaah wada hadalka dhaqaatiirtaan ugu tagay.
khadka taleefanka kula hadlay Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta
Madaxweynaha dalka Cuba